Hannaan cusub oo ay ardayda dugsiga sare wax ku baran doonto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hannaan cusub oo ay ardayda dugsiga sare wax ku baran doonto
La daabacay torsdag 18 december 2014 kl 15.00
Dawladda ayaa soo jeedisay qorshe ah in ardayda dugsiyada sare wax ku bartaan aalladda casriga ah. Hannaankan casriga ah ayaa lagu bilaabi doonaa in ardayda lagu baro afkooda hooyo, iyada oo hadhowna laga yaabo in ay ardaydu aalladda intarnatka wax ku bartaan maaddooyinka kale.
Wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin ayaa sheegay in hannaankani wax badan ka tari doono tayada waxbarashada:
- Waxa ay ardaydu ku baran doonaan afkooda hooyo. Waxaana suurogal ah in hadhow ay maaddooyinka kalena ku bartaan. Habkani waxa uu kor u qaadi doonaa tayada waxbarashada ardayda. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin
Hannaankan cusub oo ah mid uu ardaygu duruustiisa qaadanayo isaga oo aan macallinku la joogin, oo uu macallinku habka online ka loo yaqaano ku siin doono casharada, ayaa dhaqangali doona sannadka danbe,waxaanu wax laga beddeli doonaa sharciga iskuulka.